Roobab Mahiigaan ah oo ka da’ay qeybo ka mid ah Puntland – SBC
Roobab Mahiigaan ah oo ka da’ay qeybo ka mid ah Puntland
Qaar ka mid ah gobolada Dalka gaar ahaan deegaanada Puntland ayaa waxaa siweyn uga curtay roobab mahiigaan ah 2dii maalin ee ugu dambeysay .
Roobabka ayaa waxay siweyn uga de’een deegaano ka tirsan gobolada Karkaar iyo Mudug, iyadoo sidoo kalena ay ka da’een gobolo kale roobab aan sidaasi u waaweyneen.
Sida uu xaqiijiyay wariyaha SBC ee Magaalada Gaalkacyo Roob mahiigaan ah islamarkaana watay dabeylo ayaa maalin nimadii shalay ilaa xalay ka da’ay magaaladaasi Gaalkacyo, iyadoona roobabkaasi ay dhaliyeen qasaarooyin ay ka mid yihiin qaar ka mid ah guryihii magaalada oo uu saqafkii kala tagay halka kuwo kalena uu burbur u geystay.
Wadooyinka waaweyn ee magaalada ayaa xiran maanta iyadoona ay dhex jiifaan biyaha uu dhigay roobkii da’ay , waxaana sidoo kale hakad aan buurneyn ku jira ganacsiga qeybihiisa kala duwan.
Dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan magaalada ayaa iyana uu roobkani u geystay khasaare iyagoo uu ka bur buriyay aqaladii maryaha ka sameysnaa ee ay ku hoosjireen, waxaana qaarkood ay ka cabanayaan biyo ku soo galay goobiha ay degen yihiin.
Sidaasi si lamid ah ayaa waxaa uu roob mahiigaan ah isna ka da’ay magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar kaas oo mudo saacado ah ka da’aayay magaalada, dhigayna wadooyinka waaweyn biyo aad u farabadan .